Imbali yoPhuhliso-Chengdu Action Electronics Joint-Stock Co., Ltd.
Umtshini weGesi yasekhaya
Isikhangeli seGesi eTshayo yasekhaya
Ivalve yegesi yeSolenoid yasekhaya
I-Pipeline yegesi yokuzivala iValve
Isixhobo esiphathwayo segesi
Isixhobo esiphathwayo seGesi esinye
Isixhobo esiphathwayo seGesi eSininzi
Umtshina wokuvuza kwegesi yeLaser ephathwayo
Umtshini weGesi weAlam yoShishino
I-Fixed Gas detector
I-Alam engenakuqhambuka eVikelekayo-ebonakalayo
Iphaneli yokulawula iAlarm yegesi
IValve yeSolenoid yoShishino
Ibhokisi yokudibanisa iValve ye-Solenoid
Ibhokisi yokudibanisa abalandeli
Kutheni Khetha thina?
Isenzo se-Chengdu sikhethekileyo kwi-design ezimeleyo, i-R & D, imveliso, ukuthengisa kunye nokuthengiswa kwe-gas detector, i-gas leak discovery system solutions, i-gas alarm controller system solutions.Umgca wemveliso uquka imifuziselo engaphezulu kwe-30 efana nenkqubo yokulawula irhasi, umtshini wegesi osisigxina kwimizi-mveliso, umtshina werhasi yasekhaya kunye nesixhobo esiphathwayo segesi.
Izicelo ziquka i-petroleum, ikhemikhali, isinyithi, imigodi, i-iron kunye nentsimbi, i-electronics, umbane, amayeza, ukutya, impilo yezonyango, ezolimo, igesi, i-LPG, itanki ye-Septic, ukunikezelwa kwamanzi kunye nokukhutshwa, ukufudumeza, ubunjineli bakamasipala, ukhuseleko lwasekhaya kunye nempilo, uluntu. iindawo, unyango igesi inkunkuma, ukucocwa ilindle, kunye namanye amashishini amaninzi.Inani leemveliso kunye nobuchwepheshe lifumene amalungelo awodwa omenzi wechiza kunye nesoftware, kwaye zineCMC, CE, CNEX, NEPSI, HART kunye ne-SIL2 imvume, njl.
·I-workshop ye-4.0 ye-workshop esemgangathweni yemveliso yonyaka ye-15 yezigidi ze-MEMS zophando kunye neeprojekthi zophuhliso zafakwa kwimveliso.
·Uphumelele uShishino loMbonakaliso lweMfezeko yePhondo laseSichuan lowama-2018; Ufumene isatifikethi sobulungu beSichuan Gas Association.
·Isekwe iminyaka yayo engama-20 kwaye yabamba umbhiyozo onomxholo othi “UKhuseleko lweMinyaka engama-20, iThenjwe kumashumi eminyaka”.
·Isixhobo sokubona igesi esikrelekrele esinentshukumo yophawu lwathiywa njengemveliso edumileyo kwiPhondo laseSichuan nguRhulumente wePhondo laseSichuan.
·Le nkampani yathiywa njengesiseko soqeqesho lwe-loT engaphandle kwekhampasi kunye nesiseko soqeqesho kumaziko emfundo ephakamileyo kwiPhondo laseSichuan.
·Inkampani yafumana iSatifikethi seCMMI3; Yachongwa njengeziko lobuchwephesha eChengdu.
·Kufunyenwe i2014 Excellent High-tech Enterprise.
·Inikwe ufikelelo yiChina Resources Gas kwaye yaba ngumthengisi ofanelekileyo.
·Ufumene iSatifikethi seNqanaba-ll iSiqinisekiso soYilo lobuNjineli boMlilo kunye noKwakha; Iziko loPhando lobuNjineli boBunjineli baseChengdu lidweliswe njengeziko lophando lobuchwephesha lobunjineli kwinqanaba likamasipala.
·Inkampani yaba yenye yamashishini alishumi abalaseleyo e-IoT e-Chengdu; Yanikwa imvume yokufikelela yi-CNOOC kwaye yaba ngumboneleli ofanelekileyo.
·Waba ngumlawuli weChengdu IoT Alliance;Unikwe ukufikelela yi-ENN kwaye waba ngumthengisi ofanelekileyo.
·Waba ngumboneleli ofanelekileyo weWebhusayithi yokuFumana iGesi yaseChina (uhlaziyo lwayo lokuba nezabelo lugqityiwe kwaye inkampani yathiywa igama ngokuba yiChengdu Action Electronics Joint-Stock Co., Ltd kwangaloo nyaka).
·Inkampani ichongiwe njengeshishini lesizwe le-hi-tech.
·Uphumelele iMbasa yeNzululwazi yobuNzululwazi kunye neTekhnoloji kwaye wafumana iSatifikethi se-AAA-Credit Enterprises eTshayina;Inkampani inikwe ukufikelela kwi-SINOPEC kunye ne-Energy Ahead Website kwaye ibe ngumthengisi ofanelekileyo.
·Inkampani iphumelele isoftware yesoftware kunye nesiqinisekiso semveliso yesoftware kwaye yayiyireyithi "umrhafi omkhulu" kwiHi-tech Zone, eChengdu.
·Inkampani inikwe ireyithingi "njengeshishini elithembekileyo eligxininisa umgangatho kunye nokuthobela imithetho" yiZiko leNgcaciso yoMgangatho weSichuan kunye neTechnical Supervision.
·Le nkampani ixhaswe ngemali yiNational Innovation Fund.
·Inkampani inikwe ireyithingi njengeshishini le-hi-tech liSebe lePhondo leSayensi kunye neTekhnoloji yaseSichuan.
·Inkampani yaba yinkampani yokuqala kumazantsi-ntshona eTshayina ephumelele uhlolo lwemeko yefektri ukuze yamkelwe uhlobo.Iimveliso ezintsha zifunyenwe zamkelekile xa zihlolwa.
·Inkampani ifumene iSatifikethi sokuHlola kwi-China National Supervision and Test Centre yoMgangatho weMveliso yeMlilo yoMlilo kunye neemveliso zathengiswa eBeijing.
IAlam yerhasi etshayo, China Gas Detector, umtshini wegesi onokutsha, Isikhangeli segesi se-lpg, umtshini wegesi osisigxina, isixhobo segesi,
No.88, West Wulian Street, IOT Park, Shuangliu Southwest Airport Economic Development Zone, Chengdu, China
Isisombululo seGesi yamafutha
Isisombululo seGesi yoShishino
Utility Utility Ituneli yegesi Alamu isisombululo
© Copyright 20112022 : Onke Amalungelo Agciniwe.